Ungawubonisa kanjani umyalezo wombhalo? - Easy Multi Khombisa
Idalwe Qalile 30 / 04 / 2021
14. Umlayezo wombhalo
Ukubonisa imibhalo yamahhala kwimidiya eyodwa noma eminingana ngasikhathi sinye akukaze kube lula ukwedlula nge-Easy Multi Display! Siyakuchaza ukuthi ungayilungiselela kanjani kalula i-EMD ukubonisa imilayezo yakho!
Ungakhombisa imibhalo yamahhala ku-Easy Multi Display ngokumane uchofoze kusithonjana esimise insimbi kubha yamathuluzi yesoftware. Ngemuva kwalokho kuzovulwa iwindi elisha lokucushwa kwemiyalezo ebhaliwe.
Easy Multi Khombisa yamathuluzi
Ukuhlelwa kwemiyalezo yombhalo kunezingxenye ezimbili esizobona ndawonye.
Imilayezo yakho: kulapho yonke imilayezo yakho echazwe ngaphambilini izovela khona (ngakho-ke yenziwe ngaphambili). Lokhu kulapha lapho uzofaka khona futhi ususe imilayezo yakho. Kulesi sigaba uzoba nethuba lokushintsha ukwakheka kwemiyalezo yakho. Isoftware yethu izokuvumela ukuthi ushintshe ukuqondiswa komyalezo, usayizi, umbala, ifonti njll.
Khombisa: Yilapho uzokhetha khona ukuthi yimuphi umyalezo ozowubonisa nokuthi iziphi izikrini.
Iwindi lokumiswa komyalezo wombhalo
Izindlela ezi-6 zokusebenzisa izimpawu zedijithali ukukhulisa ibhizinisi lakho
Izimpawu zedijithali njengendlela ephelele yokuheha amakhasimende amasha! Isetshenziswa kanjani futhi kuphi?
Izimpawu zedijithali zinika amandla ukuvulwa kwesitolo nangaphezulu